အစဉ်သာရင်မှာ....! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော့် အကိုကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကဗျာလေးပါ ပညာရှင်တော့ မဟုတ်ပါ ဝါသနာရှင်လေးဖြစ်သောကြောင့် နားလည်ပေးပါ...!
နေရာချင်း ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး အစဉ်သာရင်မှာ နွေးထွေးနေတာ မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းများစွာ
ယုယခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ အကြင်နာ ဖေးမမှုနဲ့ မင်းရဲ့ ဂရုဏာ ငါ့အပေါ် ထားခဲ့တဲ့မေတ္တာ
ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်မသွားပါ ယနေ့တိုင် အမှတ်တရ ရှိနေဆဲပါ....
Win Minbu (16.1.2012) ပျော်ရွှင်ခြင်းများဖြင့်ပြည့်စုံပါစေ...! လေးစားလျှက်*****အိမ်လွမ်းသူ
No Response to "အစဉ်သာရင်မှာ....!"